ONLF, Halgankeedu Ma Colaada Itoobiya Iyo Eritrean Ayuu Ahaa? – Rasaasa News
ONLF, Halgankeedu Ma Colaada Itoobiya Iyo Eritrean Ayuu Ahaa?
Nov 10, 2018 Eritrea, Meles, ONLF, Zinawi
Jijiga, Nov 10, 2018 – Ethiopia iyo Eritrea waxaa dhexmaray heshiis taariikh ah, ka dib kolkii uu Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiya Axmed Cali, shuruud la,aan ogolaaday heshiiskii Aljeris oo ay Itoobiya horaan u diiday.
Abiye Axmed, ayaa hal mar badalay cadaawadii xooga badnayd ee u dhaxaysay labada dal, ka dib kolkii uu si lama filaana uga dagay Caasmara.
Wali ma cada, cida ka dambaysa heshiiska Eritrea iyo Itoobiya, laakiin waxaa hubaal ah in ay ku jirto gacan saddexaad oo reer galbeed ah.
Shirkada qoda shidaalka ee ay leeyihiin ciidamada dalka Shiinaha ee la yidhaahdo GCL-Poly ayaa dhawaan ka soo saartay shidaal baaxad leh gabalka Soomaalida ee loo yaqaan (Ogaden). Waxaana la rumaysan yahay in heshiiska Eritrea iyo Itoobiya ay saldhig u tahay Saliida laga soo saaray gabalka Ogaden.
Dhamaystirka marinada shidaalka maamulkiisa waxaa qaatay shirkada Ingriis ah, taas oo qandaraas ku siisay shirkada Nigeriyan ah.
Eritrea waxay ka go,oday Itoobiya sanadkii 1993, iyada oo aan marin hanaanka caalamku u maro helida xoriyada iyo noqoshada dal madax babaan.
Dalgaalkii dhex maray labada dal 1998-2000, Eritrea waxay ku martiqaaday dalkeeda mucaaradka Itoobiya, si ay u ridaan xukuumadii Meles Zinawi, ONLF waxay ka mid noqotay ururadii saldhigayo iyo taageero hagar la,aan ah helay. ONLF, oo baahi badan u qabtay taageero dibadeed ayaa bilowday dhismaha ciidankeeda hub iyo saanad badana gacanta loo galiyey si ay u wiiqdo xukuumadii Meles Zinawi.
Arintaasi waxay keentay in talada ONLF gacanta u gasho Eritrea. ONLF waxay ka dhalatay, gacandhaakii dawladii Soomaaliya kula dhaqantay halgankii ay waday Jabhadii Gobonimodoonka Soomaali Galbeed (WSLF) 1977.
Siyaasiyiin ka mida ONLF ayaa mudo ka dib dareen ka muujiyey hanaanka ay xukuumada Eritrea ula dhaqmayso ururka. Dawlada Eritrea ayaa talaabo dag dag ah ka qaaday xubno uu ka mid ahaa Dr. Maxamed Siraad Dolal, ka dib kolkii ay ku qancin wayday taladeeda, waxaana laga saaray xubinimadii ONLF. In kasta oo markii dambe ONLF u kala jabtay labo garab, dabadeedna mid ka mid ah uu Itoobiya heshiis hoose la galay October 10, 2012.
Heshiiska ay Eritrea la gashay Itoobiya wuxuu sababay in garabkii ugu dambeeyey ONLF uu dib ugu laabto Itoobiya, iyada oo ayna jirin heshiis la saxiixay. Dareenkii ay dalka Eritrea ka qabeen xubihii ONLF, 2004 ficilkiisii waa kan maanta ONLF ku khasbay in ay marto meesha ay Eritrea marto. Waxaa la iswaydiin karaa, ma halkaas ayuu ku dhamaan halgankii dheeraa ee ONLF, soo gashay sidii WSLF, mise waxaa jira wax qarsoon.
Ilo xog ogaal ah gudaha ONLF, ayaa sheegay in ay jiraan xubno muhiima kana mid ahaa aas aasayaashii ONLF, kuwaas oo diiday tagida Itoobiya. Waxaana la sheegay in saddex xubnood oo ONLF ay 45 bari joogeenn dalka Masar.
Masar waa dal ay colaad qabow kala dhaxayso dalka Itoobiya, taas oo sal u ah biyo xidheenka wayn ee Itoobiya ka dhisayso wabiga Nile. Dalka Suudaan oo dhismaha biyo xidheenka Nile saamayn ku yeelanayo, ayaa ku badalanay celinta dhul ay Itoobiya hore uga haysatay.
ARDUF, oo Beenisay in TPLF ay Ahayd Musuq iyo Cadaalad Daro Mid ku Dhisnayd
Suurto Galnimada iyo Dhamaystirka Aragtidda Siyaasadeed ONLF